About Product Replacement Comparison
English Chinese (Traditional) Burmese Khmer Vietnamese Sinhala Hindi Indonesian Thai Arabic French Chinese (Simplified) Japanese
ဆီစစ်စကာ်သည် အင်ဂျင်ဝိုင်ကို စစ်ထုတ်ပေးကာ ယင်းသည် ပွတ်တိုတ်အားနှင့် လောင်စာလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် သတ္တု- အမှုန်အမွှား/ ကာဗွန် ညစ်ညမ်းမှုတို့ကို တားဆီးရန် ချောဆီအဖြစ် ဝန်ဆောင်ပေး၍ အင်ဂျင်အထဲတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကာ၊ လှုပ်ရှားမူကို ချောမွေ့စေပါသည်။
အရည်အသွေးညံ့သော ဆီစစ်စကာကိုသုံးလျှင်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်သည် တဖြည်းဖြည်း သတ္တုအမှုန်အမွှားများအဖြစ် ညစ်ထေးလာကာ ကာဗွန်များနှင့် ရောထွေးသွားကြသည်။
ယင်းက သင့်အင်ဂျင်၏သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေပြီး အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ပျက်စီးစေသည်။
၁။ စစ်ထုတ်ခြင်း ထိရောက်မှု ပိုမြင့်မားခြင်း
၂။ ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ပြန်ယိုစိမ့်မှု ထိန်းခြင်း
၃။ ပိုမိုအားပြင်းပြီး တာရှည်အသုံးခံသည် ( ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိသည်)
ကားပိုင်ရှင်၏ လက်စွဲအဖြစ်နှင့် ထုပ်ပိုးဗူးအနောက်ရှိ တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပေးပါ။
လမ်းညွှန်ချက်လက်စွဲနှင့် ယာဉ်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း မှတ်တမ်းများကို အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် အတွက် ရည်ညွှန်းပါရန် DENSO မှ.တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
မော်ဒယ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး မှန်ကန်သည့် လဲလှယ်တပ်ဆင်ရမည့် အချိန်ကာလသည် ကွာခြားနိုင်ပါသည်။.
ရေသန့်စင်သည့်စကာစစ်လိုပင်၊ ဆီစကာစစ် ပစ္စည်း (စကာစစ် ကြားခံပြား) သည်လည်း အချိန်နှင့်အမျှ ညစ်ညမ်းလာပြီး အမှုန်စစ်ကို သင့်လျော်သည့် ကြားကာလမှာ အစားထိုးလဲခြင်း မပြုလုပ်ပါက ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားစေလာပါသည်။
ပိတ်ဆို့နေသည့် အမှုန်စစ်ကို ဆက်လက် သုံးစွဲနေခြင်းက ထုတ်လွှတ် အဆို့ရှင်ကို စတင်အလုပ်လုပ်စေပါသည်။
သတ္တူအမှုန်များနှင့် ကာဗွန်မှုန့်များ ပါဝင်နေသည့် အင်ဂျင်ဆီသည် အင်ဂျင်အတွင်း လည်ပတ်သွားနေမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် အင်ဂျင်ဆီ ကို အလိုလို အရည်အသွေးကျစေမှု မြန်ဆန်စေရုံသာမက သတ္တု အမှုံအမွှားများကြောင့် အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းကိုလည်း ပျက်ဆီးစေလျှက် အင်ဂျင်ချို့ယွင်းမှုကို ဦးတည်စေပါသည်။
ထို့ပြင် စစ်ထုတ်ထားခြင်းမရှိသော အင်ဂျင်ဆီ လှည့်ပတ်နေမှုက လောင်စာလောင်ကျွမ်းခြင်း ဆုံးရှုံးသွားစေသည်မှာ အင်ဂျင်ထဲ၌ ညစ်ညမ်မှု စုပြုံလာသောကြောင့်ဖြစ်၍ လောင်စာဆီ လုံလောက်မှု နှင့် အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယိုယွင်းစေသည်။
ထို့ကြောင့်၊ မှန်ကန်သင့်လျော်သည့် ကြားကာလမှာ ဆီစကာစစ်ကို အစားထိုးလဲပေးရမည်*။
*မှန်ကန်သင့်လျော်သည့် အစားထိုးလဲခြင်း ကြားကာလသည် မော်ဒယ်အလိုက်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိလိုပါက ယာဉ်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး မှတ်တမ်းများ နှင့် အသုံးပြုလမ်းညွှန် ညွှန်းဆိုချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ကိုးကားရည်ညွှန်းပါ။
စမ်းသပ်ချက် နည်းလမ်း- JIS D 3904, D 1611
ထုတ်ကုန် အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်များ
စမ်းသပ် ပစ္စည်းများ မှတ်ချက်များ မှတ်ချက်များ
အချင်း x အမြင့် (မီလီမီတာ) အတိုင်းအတာ ဆင်တူခြင်း ထိန်းချုပ်မှု အချက်အလက်အမှန်: ထုတ်ကုန်၏ တူညီသောအရွယ်ကို နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် အသုံးပြုထားပါသည်။
စစ်ထုတ်ခြင်း ဧရိယာ (cm2) တည်ဆောက်ပုံ ဆင်တူသည်၊ သို့သော် စက္ကူမှာ ကွဲပြားပါသည် ထိန်းချုပ်မှု အချက်အလက်အမှန်: တူညီသောစစ်ထုတ်ခြင်း ဧရိယာကို နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် အသုံးပြုထားပါသည်။
2. ကနဦး သွင်ပြင် လက္ခဏာများ
စမ်းသပ် ပစ္စည်းများ ရလဒ်များ မှတ်ချက်များ
ဖိအား လော့စ် ( kPa)
စမ်းသပ်သည့် ဆီ- SAE#30
စမ်းသပ်သည့် ဆီ အပူချိန်- 80oC
စမ်းသပ်ချက် စီးဆင်းမှု နှုန်းထား- 20 l/min(မိနစ်)
ဆီ စီးဆင်းမှု အသွင်အပြင်များကို ပြသသည့် ကိရိယာ.
CG's တွင် အားနည်းသည့် ဖိအားလော့စ်ရှိပြီး အင်ဂျင်တွင်း ချောဆီထည့်ခြင်းစနစ်ရှိ ဆီဖိအား အဆင့်ကို ဖော်ပြမှုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိန်းသိမ်းနည်းဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဖက် A ထက် အားကောင်းသော အင်ဂျင်အား ချေဆီထည့်သည့် စနစ်ရှိပါသည်။!
စီးဆင်းမှု နှုန်းထား- 10 l/min( မိနစ်)
စမ်းသပ်သည့် ဖုန်မှုန်- အပျော့စား-C2A
အဆုံးနေရာဖိအား ဆုံးရှုံးမှု- 80 kPa
CG's စကာစစ်၏ မြင့်မားသော စစ်ထုတ်ခြင်း ထိရောက်လုံလောက်မှုက အင်ဂျင်ထဲမှာ ရှိနေသည့် ညစ်ညမ်းမှုများကို အစမှမှန်ကန်စွာစစ်ထုတ်ယူ၍ သင့်အင်ဂျင်ကို ဟောင်းနွမ်းခြင်းမှ တားဆီးပေးပါသည်။
ပြိုင်ဘက် A ၏ စကာစစ်သည် ဤကနဦး အဆင့်တွင် အင်ဂျင်ဆီကို ကောင်းမွန်စွာ မစစ်ထုတ်ပေးပါ။
အင်ဂျင် ရပ်နားနေသည့် အချိန်တွင် အတွင်းပိုင်း ဆီစစ်စကာမှ ပြန်လည်ယိုစိမ့်သည့် ဆီ ပမာဏကို ပြသသည်။.
CG's တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြန်လည်ယိုစိမ့်စေခြင်းမရှိသည့် သွင်ပြင်ရှိသည်, ဆိုလိုသည်မှာ အင်ဂျင်အတွင်း ချောဆီထည့်ခြင်းစနစ်ရှိ ဆီဖိအားသည် စံနှုန်းအထိ လျှင်မြန်စွာရောက်သွားပြီး အင်ဂျင်အားကာကွယ်ခြင်းကို အင်ဂျင်တဖန် ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် ပြုလုပ်သည်။.
3. ခွန်အား နှင့် တာရှည်ခံမှု
ဖိအား လှုံ့ဆော်ချက် မောပန်းမှု
စမ်းသပ်ချက် ဖိအား- 200 <-> 890 kPa
တင်းကြပ်သော လိမ်အား- 15 N?m
ဆီစကာစစ်က ဖိအားအောက်တွက် မယိုစိမ့်မီ၊ စကာစစ်တွင် ခုခံအား ဘယ်လောက်ရှိသည်ကို ပြသည့် အညွှန်း။ အေးနေသော အင်ဂျင်ကို စက်နှိုးရန် ထပ်တလဲလဲဖြစ်နေသည့် ဖိအားအောက်မှာ ဤ စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ပါသည်။ မီးဘေးအန္တရာယ်မှ တားဆီးရန် အရေးကြီးသည့် အချက်။
CG's သည် ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပြီးသည့်တိုင် ပို၍တာရှည်ခံနိုင်သည်ကို အာမခံပါ သည်။၊
ဆီ အပူချိန်- အခန်း အပူချိန်
ဤနေရာမှ အမှုန်စစ်ကို ဆီစကာစစ်၏ “စကာစစ် ကြားခံပြား” အဖြစ်ရည်ညွှန်းပါသည်။ အမှုန်စစ်က ပိတ်ဆို့ပြီး ဖိအားအောက်မှာ ရှိနေချိန်၌ စမ်းသပ် ချက်သည် အမှုန်စစ် ဘယ်လောက် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း CG သည် ပိုမိုပြီး ပြိုင်ဖက် A ထက် အားကောင်းပါသည်။ထို့ကြောင့် ယင်းသည် အလွယ်တကူ မပျက်ဆီးနိုင်ပါ။ အင်ဂျင်သည် ထို့ကြောင့် well အကာအကွယ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။.